Omicron က Covid ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးကွဲဖြစ်နိုင်လား... • Zifam Myanmar
Home » Omicron က Covid ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးကွဲဖြစ်နိုင်လား…
Omicron က Covid ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးကွဲဖြစ်နိုင်လား…
Omicron မျိုးကွဲဟာ ရောဂါလက္ခဏာသိပ်မဆိုးရွားစေတဲ့အပြင် ကူးစက်ပျံ့ပွားမှုနှုန်း အလွန်မြန်ဆန်တဲ့အတွက် လူအများအပြား Covid Anitibody ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပြီး နောက်ထပ် Covid ရောဂါပိုးအသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကိုတားဆီးနိုင်မှာလား။ ဒါမှမဟုတ် နောက်ထပ်မျိုးကွဲအသစ်တွေကို ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက် လမ်းစတစ်ခုဖြစ်နေမလား။
အဆိုပါအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး Omicron အပေါ်ပညာရှင်များရဲ့အမြင်တွေကဘယ်လိုရှိမလဲ၊ ဘာကြောင့် Omicron လုံးဝမပေါ့ဆသင့်တာလဲ ဆိုတာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
Covid-19 မျိုးကွဲအသစ်ဖြစ်တဲ့ Omicron မျိုးကွဲဟာ လတ်တလောတွေ့ရှိချက်များအရ ရောဂါလက္ခဏာ ပြင်းထန်မှုအနေနဲ့ အရင်မျိုးကွဲတွေလောက်မပြင်းထန်ပေမယ့် ဆေးရုံတက်ပြီး ကုသမှုခံယူနေရခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း တို့ဖြစ်နေဆဲဆိုတာငြင်းလို့မရပါဘူး။ အသက်ကြီးသူများ၊ ရောဂါအခံရှိသူများ၊ Covid ကာကွယ်ဆေးမထိုးရသေးသူများမှာ ပိုမိုပြင်းထန်နိုင်တဲ့အတွက် အထူးသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ Omicron ရဲ့ကူးစက်မှုနှုန်းမြင့်မားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါလက္ခဏာပြင်းထန်မှုနည်းခြင်းနှင့် ကူးစက်မှုနှုန်းအလွန်မြန်ဆန်ခြင်းဟာ လူတွေကို သတိလက်လွတ်ဖြစ်စေပါတယ်။ သိပ်မပြင်းထန်တဲ့အတွက် ကူးစက်ခံရမှာကိုလည်းသိပ်ဂရုမပြုတာတွေ၊ ကူးစက်ခံရမှာပဲဆိုပြီး ကာကွယ်ဖို့သတိမပြုတာတွေဟာ ပိုမိုကူးစက်ခံရနိုင်စေပြီး ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ လူမှုရေးကဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍများကိုပါများစွာ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
မျိုးကွဲအသစ်ဖြစ်တဲ့အတွက် Omicron ရဲ့ Post-Covid (သို့) ရောဂါဖြစ်ပြီး နောက်ဆက်တွဲ လက္ခဏာများနှင့်ပတ်သက်ပြီး လက်ရှိအချိန်မှာ သေချာမသိနိုင်သေးပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Omicron နောက်ဆက်တွဲ လက္ခဏာများဟာ ပိုမိုဆိုးရွားတာလည်းဖြစ်နိုင်သလို၊ သိပ်မဆိုးရွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် ယခုအချိန်မှာ ရောဂါကူးစက်မှုမခံရအောင်အထူးသတိထားသင့်ပါတယ်။
Omicron ဟာလူအများအပြားကိုကူးစက်ပျံ့နှံ့နိုင်တဲ့အတွက် နောက်ထပ်မျိုးကွဲအသစ်ဖြစ် ပေါ်လာနိုင်ခြေကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုသေချာတာကတော့ နောက်ထပ်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ မျိုးကွဲဟာလည်း ကူစက်မှုပိုမြန်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါပြင်းထန်မှုပိုဆိုးမလား၊ သိပ်မဆိုးဘူးလားဆိုတာကတော့ ခန့်မှန်းဖို့အလွန်ခက်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် Omicron မျိုးကွဲသစ်ကို လုံးဝမပေါ့ဆသင့်ပါဘူး။ အရမ်းလည်း စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေဖို့လည်း မလိုအပ်ပဲ Mask တပ်ခြင်း၊ လက်ဆေးခြင်း၊ လူစုလူဝေးရှောင်ရှားခြင်း နှင့် Covid ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းတို့ကို စနစ်တကျလိုက်နာပြီး နောက်ထပ်ပိုမိုဆိုးရွားတဲ့မျိုးကွဲအသစ်များပေါ်ပေါက်ခြင်းကို အတူတကွကာကွယ်နိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်။
Ref: www.who.int. (n.d.). Episode #64 – Why are experts concerned about Omicron? [online] Available at: https://www.who.int/…/episode-64—why-are-experts… [Accessed 8 Feb. 2022].